mairie-antananarivo – Zavabita tao amin’ny Boriboritany faha 6
Araka ny toromariky ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana amin’ny fanatsaràna ny tanàna sy ny mahasoa ny mponina dia mihetsika ny ao amin’ny boriboritany faha 6 manatanteraka ny vinan’ny ben’ny tanàna. Araka izany, nisy ny fanadiovana faobe nataon’ny ekipan’ny boriborintany faha 6 nanomboka teo Ankazomanga atsimo hatrany Ambodivonkely. Tao anatin’izany no nanesorana ny fasika misisika eny amin’ny arabe, ny fisokirana ny lakandrano fandehanan’ny rano maloto.
Nisy ihany koa ny fametahana takamoa any amin’ny faritra mena ao amin’ny boriborintany faha 6 hisorohana ny asan-jiolahy mahazo ny mponina eny an-toerana . Ankoatra izay , araka ny fangatahan’ny mponina ao amin’ny fokontany Antanety atsimo dia nisy ny fanamboarana ny lalana manodidina ny 50 metatra eo ho eo manomboka eo amin’ny sinema Laza taloha midina mankany amin’ny sahan-dRajaonarivony.
Marihina fa ny asa fanamboarana ny lalana dia niarahana tamin’ny sehatra tsy miankina, ny fitaovana rehetra dia niantohan’ireto farany fa ny asa kosa dia ny sampan’ny asa vaventy ao amin’ny CUA sy ny ekipan’ny boriborintany faha 6 no nanatanteraka izany.